Atụkwasịla obi okwu, tụkwasara obi ihe ọ bụla. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Atụkwasịla obi okwu, tụkwasara obi ihe ọ bụla. - Amaghi ama
Okwu adabaghị na emeghị ihe ọ bụla. Anyị nwere ike ịnọdụ ma chee maka ihe dị iche iche anyị chọrọ ime. Ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mkpa ịhazi, mana ọ dị mkpa karịa ka ị gbuo ya. Ọ bụrụ na anyị emeghị, mgbe ahụ ndị a bụrụ okwu efu. Ndị mmadụ agaghị atụkwasị mmadụ obi na-anaghị eme ihe o kwuru.
Mgbe ị na-eme ihe ị kwenyere na ya, ọ na-emetụta ya, ọ na-abara ndị ọzọ uru. Mmetụta a na-eme ka ndị mmadụ cheta anyị, anyị na-enwetakwa nkwanye ùgwù na nkwụghachi. Ya mere, tinye uche gị n'ihe niile ị na-eme, lekwasị anya n'ihe ị na-eme.
Ọ bụrụ n’ịhụ na mmadụ na-ekwe ọtụtụ nkwa, soro ihe ha na-eme. Ọ ga-agwa gị gbasara omume ha. O di nfe ighota uzo mmadu si di ka omume ha si di. Ekwekwala ka ndị na-anaghị etinye okwu ha n'ọrụ.
Mgbe mmadụ mere, ọ ga-eme ike ha niile iji wee mezuo ya. Ee, ọ bụ eziokwu na ọ bụghị nkwa niile ka enwere ike idobe ya n'ihi ọnọdụ enweghị atụ, mana ọ bụ mbọ na-egosi ma gụta ya.
Ozugbo ị mebiri ntụkwasị obi mmadụ, ọ gaghị ekwe omume ịlaghachi azụ ahụ. Inweta ntụkwasị obi dịkwa njọ. Ya mere, jiri okwu gị mee ihe n'eziokwu ma chigharịa ka ọ rụọ ọrụ na-emetụta gị. Nke a na - enyere ndị mmadụ aka ịtụkwasị gị obi ma wulite mmekọrịta siri ike.
Ya mere, kpachara anya banyere etu ị ga-esi tụkwasị ndị mmadụ obi. Mara onye ị ga-atụkwasị obi yana otu esi ejide ntụkwasị obi onye ọzọ. Ọ na - enyere gị aka inweta nkwanye ugwu ma mee onwe gị ka ị bụrụ onye a tụkwasịrị obi.
Quotị ndị metụtara:
Okwu mkpamume nke amamihe
Andhụnanya na ntụkwasị obi Quotes
Okwu bara uru
Nhota Banyere Okwu
Nhota Banyere Okwu na Omume
Okwu mkpirisi nke amamihe
Atụmatụ Ntụkwasị Obi
Ntụkwasị obi na-agbago Foto
Quotresị di nkenke
Okwu amam-ihe nke amamihe
Okwu amamihe na ndụ
Okwu okwu amamịghe
Okwu okwu amamihe
Ị nwekwara ike-amasị
Jiri nwayọ jee ije na ndụ ndị ọzọ. Ọ bụghị ọnya niile ka a na-ahụ anya. - Amaghi ama
Anyị nwere ike ịhụ mmadụ ka ọ na-enwe ọ happyụ ma na-achịkwa ọchị mgbe niile, mana nke ahụ apụtaghị na ọ bụ…
Onye obula choro obi uto, onweghi onye choro ihe ngbu, ma igaghi egwurugwu naenweghị mmiri ozuzo. - Amaghi ama
Obi ụtọ bụ ihe kacha mkpa na ndụ anyị. Anyị na-anwa ime obi ụtọ mgbe niile. Na iji nweta…
Kpachara anya maka ndị okwu ha ekwekọghị na omume ha. - Amaghi ama
Ọ dị mfe ikwu karịa ime ya! Ee, ndị mmadụ na-ekwukarị ọtụtụ ihe, mana ọ bụrụ na ichere…
Mgbe ịchọtaghị ụzọ isi dozie nsogbu, eleghi anya ọ bụghị nsogbu idozi, kama ọ bụ eziokwu ka a nabata. - Amaghi ama
Mgbe ịchọtaraghị nsogbu ọ bụla, ma eleghị anya ọ bụghị nsogbu ị ga-edozi, kama…
Anọkwala mgbe gị na onye ọ bụla nọ ma ọ bụrụ na ha na-eche otu ihe maka gị, n'ihi na atụghị anya otu ihe nwere ike imebi gị. - Amaghi ama
Ya adịla mgbe gị na onye ọ bụla! Ee, ikekwe ị gaghị achọpụta ya rue mgbe ọ gwụla ma come bịara…